Kuvanzika uye neMitemo - WoopShop ®
Welcome to WoopShop.com. Paunenge uchitsvaga kana kutenga kubva kuneWoopShop.com, yako yakavanzika uye yako ruzivo rwevanhu zvakachengetedzwa uye zvinoremekedzwa. WoopShop.com inopa zvakanakisa masevhisi kwauri pasi pezviziviso, mazwi, uye mamiriro akatarwa pane ino peji.
• WoopShop.com remekedza zvakavanzika zvese mushanyi kana mutengi webhusaiti uye tora yako yekuchengetedza online zvakanyanya.
• WoopShop.com inounganidza ruzivo rwunosanganisira yako Email, Zita, Kambani zita, Rue Kero, Tumira Code, Guta, Nyika, Nhamba dzefoni, password uye zvichingodaro, kutanga, tinoshandisa makuki anodiwa kuunganidza uye kuunganidza asiri- pachako ruzivo runowanikwa pamusoro pevashanyi kune yedu saiti. Ruzivo rwakasiyana newe. Vashandisi vanogona, zvisinei, kushanyira saiti yedu vasingazivikanwe. Isu tichaunganidza ruzivo rwekuzvizivisa kubva kuneVashandisi chete kana vakaita neruoko nenjodzi kwatiri Vashandisi vanogona kugara vakaramba kupa ivo pachavo ruzivo ruzivo, kunze kwekuti zvinogona kuvadzivirira kubva mukuita mune zvimwe zviitiko zvinoenderana neSaiti.
• Tinogona kuunganidza isu pachedu ruzivo rwekushandisa kubva kune Vashandisi munzira dzakasiyana siyana, kusanganisira, asi zvisingabvumirwe, kana Vashandisi vashanyira nzvimbo yedu, kunyoresa pane saiti, isa oda, kupindura kuongororo, zadza fomu, uye nekubatana. nezvimwe zviitiko, masevhisi, zvigadzirwa kana zviwanikwa zvatinoita kuti zvivepo pane yedu saiti. Vashandisi vanogona kubvunzwa, sezvakakodzera, zita, email kero, kero yekutumira.
• Isu tinoshandisa ruzivo rwacho kutibatsira kuita kuti zvive nyore kuti iwe ushandise, kupindura zvikumbiro kana zvichemo, kutibatsira kuratidza zvakanyanya kukosha kwauri uye kukuyeuchidza nezveruzivo rutsva, zvigadzirwa nekutengesa, coupons, kukwidziridzwa kwakakosha uye nezvimwe. on.
• Munguva yekunyoresa kwako, iwe uchaudzwa kuti utipe zita rako, kutumira uye kubhadharisa kero, nhamba yefoni, uye email kero. Aya marudzi eruzivo rwemunhu ega anoshandiswa kuzviitira kubhadharisa, kuzadzisa mirairo yako. Kana isu tine matambudziko kana tichigadzirisa yako Order, tinogona kushandisa ruzivo rwemunhu iwe rwaunopa kuti vakubate iwe.
• Iwe unogona kuzvinyoresa uchishandisa iyo link kubva kune chero email tsamba kana yako wega kunyoreswa gadziriro kana wapinda mukati.
• Tinogona kutora non-munhu chitupa ruzivo nezve Vashandisi chero ivo pavanosangana neSiti yedu. Ruzivo rusiri rwemunhu rwekuziva runogona kusanganisira zita rebrawuza, mhando yekombiyuta uye neruzivo ruzivo nezve nzira dzeVashandisi dzehukama kune yedu saiti, senge hurongwa hwekushandisa uye yevashandi vepaInternet vanoshandisa uye nerumwe ruzivo rwakafanana.
• Yedu Saiti inogona kushandisa "kuki" kusimudzira Mushandisi ruzivo. Webhusaiti yewebhu yevashandisi vanoisa makuki pane yavo hard drive yezvinorekodwa-zvekuchengeta uye dzimwe nguva kutevedzera ruzivo nezvavo. Vashandisi vanogona kusarudza kuseta yavo web browser kuti varambe makuki kana kukuzivisa iwe kana makuki ari kutumirwa. Kana vakaita saizvozvo, cherekedza kuti zvimwe zvikamu zveSayiti zvinogona kusashanda nemazvo.
• WoopShop inounganidza uye inoshandisa Vashandisi ruzivo rwevanhu nezvezvinotevera zvinangwa:
(1) Kuita iwe pachako ruzivo rwevashandisi
Tinogona kushandisa mashoko ari uwandu hwezvinhu zvose zvabatanidzwa. kunzwisisa sei Users edu seboka shandisa mabasa uye pfuma chero zvedu Site.
(2) Kuvandudza yedu saiti
Isu tinoramba tichiedza kuvandudza ma webhusaiti edu maererano nemashoko uye mhinduro yatinowana kubva kwamuri.
(3) Kuvandudza basa revatengi
Mashoko ako anotibatsira kuti tibvunze zvakanakisisa kune zvikumbiro zvebasa rako nevatengi uye zvido zvekutsigira.
(4) Kuita zvekuchinjana
(5) Kutungamira zvemukati, kukwidziridzwa, kuongororwa kana chimwewo chikamu cheSayiti
(6) Kutumira maemail nguva nenguva
E-mail Kero Vanoshandisa kupa urongwa hwokugadzirisa, vachongoshandiswa chete kuvatumira ruzivo uye zvinyorwa zvine chokuita nehurongwa hwavo. Inogonawo kushandiswa kupindura mibvunzo yavo, uye / kana zvimwe zvikumbiro kana mibvunzo. Kana Akashandura achisarudza kupinda mukati redu rekunyora mazita, vachagamuchira maimeri angangosanganisira nhau dzekambani, zvigadziriswa, zvakagadzirwa nemhizha kana ruzivo rwebasa, nezvimwewo. Kana chero nguva Mutengi angada kuzvisunungura kubva kune maimeri emajeri, tinosanganisira zvakadzama kusazvitsaurira mirayiridzo iri pasi pemhesi imwe neimwe kana Mutevedzeri anogona kutitaurira neShoko redu.
• Isu tinogamuchira yakakodzera data kuunganidza, kuchengetedza, uye kugadzirisa maitiro uye maitiro ekudzivirira kuchengetedza kubva kusingatenderwe kuwana, kushandurwa, kuburitswa kana kuparadzwa kweruzivo yako pachako, zita remuchinda, password, transaction ruzivo uye data rakachengetwa pane yedu saiti.
Sensitive uye yakavanzika data kuchinjanisa pakati peSiti nevashandisi vayo kunoitika pane SSL yakachengetedzwa yekukurukurirana chiteshi uye yakavharidzirwa uye yakachengetedzwa nedhijitari siginecha.
• Hatitengese, tengesa, kana kubvarura Vashandisi ruzivo rwekuzivikanwa kune vamwe. Tinogona kugovera generic yakavhenganiswa ruzivo rwevanhu isina kubatana neruzivo rwekuziva nezvevashanyi uye vashandisi nevatinoshanda navo bhizinesi, vatinoshanda navo vatengi Tinogona kushandisa wechitatu-bato basa kupa kuti vatibatsire kuita bhizinesi redu uye iyo Iyo Saiti kana kutungamira zviitiko panzvimbo pedu, sekutumira matsamba kana ongororo. Tinogona kugovera ruzivo rwako nevatatu mapato nekuda kwezvikonzero zvishoma kana uchinge watipa mvumo yako.
• Vashandisi vanogona kuwana kushambadzira kana zvimwe zvirimo paSiti yedu zvinobatana nesayiti uye masevhisi evatikabatana navo, vatengesi, vashambadziri, vanopa marezinesi uye vamwe vanhu vechitatu. Isu hatidzore zviri mukati kana zvinongedzo zvinoratidzika pane aya masayiti uye hazvisi mhaka yeaitiro anoshandiswa nemawebhusaiti akabatana kana kubva kune yedu saiti. Uye zvakare, aya mawebhusaiti kana masevhisi, kusanganisira zvirimo nezvinyorwa, zvinogona kunge zvichichinja. Nzvimbo idzi nemasevhisi anogona kunge aine yavo yekuvanzika mitemo nemashandiro evatengi. Kutsvaga nekudyidzana pane chero imwe webhusaiti, kusanganisira mawebhusaiti ayo ane chinongedzo kune yedu saiti, inoenderana neya wega webhusaiti nemitemo.
• Iyi yeCustomer Policy ndima inotsanangura kuti data rako pachako rinoshandiswa sei mukubhadhara Apple masevhisi (Apple inobhadhara). Mukuwedzera, iwe unofanirwa kuverenga mazwi uye mamiriro eApple Pay. Zviitiko zvebhizinesi rako kuburikidza neWoopShop hazvina hukama neApple Inc.
Paunoshandisa Apple Pay yekubhadhara, unogona kukumbira ruzivo rwekadhi rebhangi, nhamba yekuraira uye kero yekutumira, asi WoopShop haingatore uye chengetedza chero ruzivo kubva kune fomu rako, uye haizogovana chero ruzivo rwako pachako kushambadzira kana mamwe masangano anoshanda. mune chero chimiro.
• WoopShop ine njere yekuvandudza iyi yekuchengetedza nguva chero nguva. Isu tinokurudzira Vanoshandisa kazhinji kuti vatarise peji ino kana paine shanduko kuti ugare uine ruzivo nezvekuti tiri kubatsira sei kuchengetedza ruzivo rwemunhu rwatinounganidza. Unobvuma uye unobvuma kuti ibasa rako kuongorora iyi yekuchengetedza nguva nenguva uye uzive nezvekugadziridzwa.
• Nekushandisa ino saiti, unoratidza kugamuchira kwako mutemo uyu. Kana iwe usinga bvumire kune iyi mutemo, ndapota usashandise yedu saiti. Kuenderera mberi kwako kushandisa Saiti inotevera kutumira shanduko kune iyi mutemo kuchanzi kubvuma kwako shanduko idzodzo.
• Kana iwe uine chero mibvunzo nezve ino zvakavanzika Policy, maitiro eiyi saiti, kana kubata kwako kune ino saiti, ndapota taura nesu pa [Email akadzivirira] or [Email akadzivirira]
• Iwe unomiririra uye waranti yekuti iwe unosvitsa makore gumi nemasere kana kushanyira iyo Saiti inotarisirwa nevabereki vako kana muchengeti. Iwe unozove wega mutoro wekuwana kwese kwekushandisa uye kushandisa saiti ino nemunhu wese anoshandisa password uye kuzivikanwa pakutanga wakapihwa iwe kuti kana kwete kuwana uye kushandisa iyi saiti iri zvechokwadi rakabvumirwa newe.
• WoopShop.com inogona kutumira kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Kwemirairo ine zvinopfuura chinhu chimwe chete, tinogona kupatsanura yako yekurongedza mumapakeji akati wandei maererano nehuwandu hwemasheya pakufunga kwedu. Ndatenda nekunzwisisa kwako.
• Kunze kwekunge zvapihwa neimwe nzira pane ino peji kana pane saiti, chero chinhu chaunotumira kana kutumira kuWoopShop.com, kusanganisira pasina muganho, mazano, kuziva-maitiro, matipi, mibvunzo, ongororo, makomendi, uye mazano pamwe chete, kutumira kunobatwa sekusavanzika uye kusingagadzirisike, uye nekutumira kana kutumira, iwe unobvuma kupihwa mutero rezinesi kupinda uye kodzero dzese dzeIP dzakabatana nazvo kunze kwekukanganisa kodzero dzakaita sedzomunyori kodzero yeWoopShop.com pasina mubhadharo uye WoopShop ichava neyehukama.
• Usashandise kero ye-e-mail yekunyepedzera, kunyepedzera kunge uri mumwe munhu asiri iwe, kana kudaro zvisirizvo WoopShop.com kana wechitatu-mapato nezvekwaakabva chero kutumira kana zvirimo. WoopSHop.com inogona, asi haingave inosungirwa kubvisa kana kugadzirisa chero Kutumira kunosanganisira makomendi kana kuongororwa chero chikonzero.
• Zvese zvinyorwa, mifananidzo, mapikicha kana zvimwe zvifananidzo, mabhatani icons, makaseti vhidhiyo, logos, chirevo, mazita ekutengeserana kana izwi software uye zvimwe zvirimo pane webhusaiti yeWoopShop.com pamwe chete, Zviri mukati, ndezveWoopShop.com kana zvirimo chete. vatengesi. Kodzero dzese dzisina kupihwa pachena dzakachengetedzwa na WoopShop.com. Vanotyora vachatongerwa mhosva yakakwana.
• Ndapota cherekedza kuti panogona kunge paine mimwe mirairo yatisingakwanise kugamuchira uye tinofanirwa kubvisa. Mapato ese ari maviri anobvumirana kuti, zvichitevera kurongeka kwekutakura, zvekufambisa ndiro basa rechitatu-bato rekutakura zvinhu. Pakati peiyi nhanho, huwandu hwakazara hwechigadzirwa (s) ndechomutengi; zvese zvinosanganisirwa chinjo uye njodzi panguva yekufambisa zvinotakurwa nemutengi.
• WoopShop.com inogona kunge iine zvinongedzo kune mamwe masosi pane internet ayo ndeayo uye anoshanda nevechitatu mapato. Iwe unobvuma kuti WoopShop.com haisi mhosva yekushanda kana yezvinhu zviripo kana kuburikidza chero saiti yakadaro.
• WoopShop.com inochengetera kodzero yekushandura aya mazwi uye mamiriro mune ramangwana pasina ziviso.